မနက်ဖြန် YBS စီးပြီး နယ်ကျော်ရင် အရေးယူခံရမှာလား? YBS ကို ဘယ်လိုလူတွေပဲ စီးလို့ရမလဲ? - Zet Star
မနက်ဖြန် YBS စီးပြီး နယ်ကျော်ရင် အရေးယူခံရမှာလား? YBS ကို ဘယ်လိုလူတွေပဲ စီးလို့ရမလဲ?
မနက်ဖြန်စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်မှစ၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ မြို့နယ် တစ်မြို့နယ်နှင့် တစ်မြို့နယ် သို့ သွားလာပါက အရေးယူသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် မြို့နယ်ချင်း ထိစပ်နေသော နေရာ၌ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်၍ နယ်ကျော် ယာဉ်များကို ဖြတ်သန်းခွင့်မပေးဘဲ ပြန်လွှတ်ခဲ့ပြီး ပညာပေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသော်လည်း မနက်ဖြန်မှစ၍ အရေးယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က သိရပါတယ်။
YBS ကလွဲ၍ နယ်ကျော်သွားလာခြင်းကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းတွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင် ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့၊ရပ်ကွက်အလိုက်တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊သို့သော်လည်း အစိုးရ က ခွင့်ပြုထားသူများ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စ သွားလာသူများ၊YBS စီးသူများအားကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
QR Pass ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများ မြို့နယ်ကျော် သွားနိုင်သည်။ YBS သို့ Taxi ဖြင့် သွားလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စ၊ အစိုးရဝန်ထမ်း (သို့) ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း မဟုတ်ပါက (သို့) QR Pass မပါရှိပါက YBS ကားပေါ် တက်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။ မနက်ဖြန်မှ စတင်ပါမယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကပါ ပူးတွဲကင်းလှည့် တာဝန်ယူပါမယ်။
← ထုတ်ပြန်ချက်တွေ၊ အမိန့်စာတွေနဲ့ မျက်စိလည်ခေါင်းမူးနေတဲ့သူတွေအတွက် ရှင်းလင်းချက်များ
လူတွေနဲ့ ပြန်လည်စည်ကားနေတဲ့ ဝူဟန်မြို့ကြီး (ပါတီပွဲတွေပါ ပြန်လုပ်နေပါပြီ) →